Fanasan-Damba Ao Anaty Trano
Fanasan-Damba Ao Anaty Trano Ity fehin-kinan-damba ity dia ho an'ny fampiasana anatiny. Ny vatam-paty izay kely kokoa noho ny paperback japoney dia toa ny refy amin'ny tariby, vita amin'ny malefaka tsy misy sakana amin'ny tany. Ny fehikibo mirefy 4 m dia manana lavaka 29, ny bolongana tsirairay dia afaka mihazona sy mitazona ny hangona palitao tsy misy akanjo-paty, miasa maina izy io. Ny fehikibo vita amin'ny polyurethane anti-bakteria sy azo antoka, madio ary madio ary matanjaka. 15 kilao ny enta-mavesatra. Ny pcs de pissage sy vatana rotary dia mamela ny fampiasana betsaka. Kely sy tsotra, saingy izany no tena ilaina ao anaty trano fanasan-damba. Ny fandefasana mora sy ny fametrahana marani-tsaina dia mety amin'ny karazana efi-trano rehetra.
Hopitaly Ny hopitaly, ny hopitaly dia lasa toerana tsy dia misy loko na fitaovana voajanahary noho ny firafitra vita amin'ny artifisialy hanatsarana ny fiasa sy ny fahombiazana. Noho izany, ny marary mahatsapa fa tsy tafasaraka amin'ny fiainany andavan'andro. Ny fiheverana ny tontolo milamina izay ahafahan'ny marary mandany sy manafaka ny adin-tsaina, dia tokony hatao. Ny arisivan'ny TSC dia manome habaka malalaka sy mahasalama amin'ny alalàn'ny valindrihana valindrihana misy endrika L sy ireo lavaka lehibe amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana vita amin'ny hazo. Ny fangaraharana mafana momba io maritrano io dia mampifandray ny olona sy ny serivisy amin'ny fitsaboana.
Kavina Ny kavina dia natolotry ny Almond Tree tao Blossom noloko an'i Van Gogh. Ny tsirony amin'ny sampana dia mamerina amin'ny alàlan'ny sarivongana Cartier karazana izay toy ny sampany, izay mifofofofo amin'ny rivotra. Ny loko isan-karazany ny vatosoa samihafa, manomboka amin'ny fotsy ka hatramin'ny mavokely marevaka kokoa, dia maneho ny aloky ny voninkazo. Ny felam-boninkazo misy voninkazo mamelana dia voasarim-bary samihafa. Namboarina tamin'ny volamena 18k, diamondra mavokely, morganites, safira mavokely ary turmaline mavokely. Tapitra sy vita soratra. Maivana sy maivana tsara. Izany no fahatongavan'ny lohataona amin'ny endrika firavaka.
Ny Trano Fonenana Ny Trano Slab dia natao tamin'ny fananganana fitaovana vita amin'ny juxtapose, hanambatra ny hazo sy ny beton ary ny vy. Ny famolavolana dia miaraka amin'ny fomba maoderina nefa malina. Ny varavarankely lehibe dia teboka fantsona eo no ho eo, saingy voaaro amin'ny toetrandro sy ny fijery eny an-dalambe amin'ny alàlan'ny vongan-tsambo izy ireo. Ny zaridaina dia manasongadina be ao amin'ny trano, na eo amin'ny haavo na amin'ny tany voalohany, mamela ny mponina hahatsapa ho mifandray amin'ny natiora rehefa mifampidinika amin'ny fananana izy ireo, mamorona ritra tokana rehefa mifindra avy amin'ny fidirana mankamin'ny faritra iainana.
Asabotsy 10 Aprily 2021
Trano Maitso ny trano ao anaty planar sy stereoscopic, izay mamorona tontolo iainana tsara ho an'ny mponina sy ny tanàna. Ao amin'ny faritra azon-jaza maizina, ny Breeze Soleil mampiasa io maitso io dia fomba fisainana tena mahomby. Tsy ny fiasan'ny tara-masoandro amin'ny fahavaratra ihany fa ny fiarovana ny fiainana manokana ihany koa, ny fisorohana ny fitabatabana an-dalambe ary ny fihenan-drivotra mandeha amin'ny alàlan'ny fampiasan-tena.
Ballo Fitaterana Asabotsy 19 Jona
CATINO Ny Fanangonana Efitrano Fandroana Zoma 18 Jona
Temple Mofomamy Mofomamy Alakamisy 17 Jona
Fanasan-Damba Ao Anaty Trano Hopitaly Kavina Ny Trano Fonenana Trano Fiangonana